Sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn ka dhacday Soomaaliya | Somali National Television - sntv.so
Home ARGAGIXISADA Sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn ka dhacday Soomaaliya
Sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn ka dhacday Soomaaliya
JOHANNESBURG-(SNTV)-Howl-galka Maraykanka Afrika ee Africom loo yaqaan ayaa sheegay in Diyaaradahooda dagaalku ay Laba weerar ku qaadeen fariisimaha Ururka Al-Shabaab ay ku leeyihiin Soomaaliya.
Af-hayeen u hadlay Africom, ayaa Wakaaladda wararka ee AP u sheegay in wixii xog ah ee ku aaddan Duqeynta iyo weerarrada ka dhanka ah argagixisada ay la wadaagi doonaan Dowladda federaalka Soomaaliya.
Af-hayeenka ayaa goor-dambe u xaqiijiyay warbaahinta in ay dileen xubin ka mid ahaa Al-Shabaab, duqeyntuna ay ka dhacday agagaarka Magaalada Jilib ee Gobolka Jubbada dhexe, balse ma bixin wax faah-faahin ah oo intaasi dheer.
Dhowaan ayay ahayd markii ay Ciidanka xoogga Dalka Soomaaliya oo kaashanaya saaxiibbadooda Africom ay weerar ka dhacay Degmada Jilib ee Gobolka Jubbada dhexe ku dileen ugu yaraan 50 ka tirsan argagixisada Al-Shabaab.
Previous articleWafdi ka socda Dowladda Federaalka oo gaaray Garoowe
Next articleTaliska cusub ee qeybta 21-aad oo laga Dhagax dhigay Magaalada Cadaado